Mu'asasada Linux ayaa ujeedkeedu yahay mideynta caalamiga iyadoo loo marayo isha furan | Laga soo bilaabo Linux
Linux Foundation waxay ujeedadeedu tahay midaynta adduunka iyada oo loo marayo ilo furan
Xulka wararka oo dhan | | La cusboonaysiiyay 09/06/2019 19:17 | Noticias
Waa duufaanno horumar farsamo: sirdoon farsamo, kasbashada shabakadda, 5G, codsiyada weel lagu rakibo, iyo unugyada ka shaqeysa neerfaha. Maaddaama tikniyoolajiyad cusub ay awood u siinayso isku xirnaanta ballaaran, tartanka bulshada caqliga u leh ku saleysan "internetka waxyaabaha" dedejisaa.
Waad ku mahadsan tahay iskaashiga ilaha furan, safarku wuxuu noqday iskaashi halkii uu ka noqon lahaa tartan bilaa cabir ah. Soosaarayaasha softiweerku waxay fahansan yihiin in isku darka aqoonta iyo kheyraadku ay ka wax soo saar badan yihiin keli shaqadooda, iskaashigana ka yeeshaan mashaariicda ayaa ka adkaada kala duwanaanshaha siyaasadeed iyo juqraafi.
"Haddii ay tahay Yurub, Aasiya, Shiinaha, Hindiya, Japan, horumariyayaashu waxay si aad ah isugu imaanayaan iyaga oo u maraya dowlad wadaag ah oo ka gudbeysa xuduudaha," ayuu yiri Arpit Joshipura, oo ah maamulaha shabakadaha iyo IoT ee Linux Foundation.
Joshipura wuxuu ka hadlayaa mashaariicda soo socota ee Shirka 'Open Source Summit' ee Shiinaha iyo Linux Foundation xisaabinta horumarsan, barashada qoto dheer, iyo isku xirka.
Il furan ayaa laga dareemayaa qarax ka dhaca Shiinaha, halkaas oo heerka cashuur bixiyuhu "aad u dagaal badan yahay", sida uu sheegayo Joshipura.
"Waxaa jira cabir dhan oo mashaariic ah halkaas," ayuu yiri Joshipura. "Waxaa jiri doona macluumaad badan oo ku saabsan caqliga macmalka ah iyo barashada qotoda dheer, maadaama algorithms badan oo dheeri ah ay ka soo bixi doonaan Tencent iyo Baidus iyo Alibabas ee adduunka."
Munaasabadan ayaa diirada lagu saari doonaa mowduucyada sida isku xirka 5G iyo hirgelinta Nidaamka Isgaarsiinta Furan ee Shabakadda Furan, ONAP oo loogu talagalay abaabulka iyo otomatiga shabakadaha farsamada ee ku hoos jira dalladda mashruuca Linux Foundation.
"Waxaan ku arkeynaa qeyb iskutallaab ah oo ka mid ah mashaariicda Shirka 'Open Source Summit' iyo KubeCon, dhammaantoodna waxay ku midaysan yihiin Shanghai, '' ayuu yiri Joshipura.
0.1 Wadashaqaynta danta guud
1 Meelaha barashada qoto dheer
Wadashaqaynta danta guud
Iyada oo leh awood weyn oo ah inaad diyaar u ahaato inaad isku tijaabiso codsiyada dhabta ah ee adduunka, "suuq gebi ahaanba cusub" ayaa soo baxaya.
Si kastaba ha ahaatee, wada shaqeyn la’aan ka dhexeysa qeybaha suuqa ayaa horseedeysa faa iido in ay tahay "gebi ahaanba jajab," sida laga soo xigtay Joshipura.
Kala qaybsanaantani ma aha mid wax soo saar leh, maxaa yeelay dhammaan warshadaha waxay la kulmaan dhibaato isku mid ah aasaasiga ah: maaraynta wareegga nolosha.
Mashruuca 'Edge Foundation' ee 'Linux Foundation' wuxuu isu keenayaa khibradda in ka badan 70 xubnood si loo abuuro hannaan maarayn nolol-wadaag ah oo guud oo xisaabeed ah.
Meelaha barashada qoto dheer
Mashruuc isbarbar socda Edge ee Linux Foundation, waa mashruuca Linux Foundation AI, oo diirada lagu saarayo hal abuurka AI, barashada mashiinka.
“Bulshada cilmiga sayniska, cilmibaareyaasha, ganacsatada, machadyada tacliinta iyo adeegsadayaashu waxay abuuraan qaabab iyo qaabab aan u baahnayn Ph.D. inaad adeegsato - qaababka aad u adeegsan karto si aad u hesho natiijooyinka ganacsiga, ”ayuu yiri Joshipura.
Tusaale ahaan isticmaalka isgaarsiinta, drones ayaa loo isticmaalaa in lagu baaro saldhigyada saldhigga laguna sameeyo falanqaynta dayactirka.
Macluumaadkan waxaa isticmaali kara hawl wadeenada kale ee adduunka, taasoo yareyneysa baahida loo qabo soo noqnoqoshada. Faa'iido kale ayaa ah in hawlwadeenadu aysan fahmin algorithms-ka barashada mashiinka.
Laakiin wadaagista xogta waxay noqon kartaa arrin xasaasi ah.
Mu'asasada Linux ayaa "xallisay dhibaatadaas" la Heshiiskaaga Shatiga Xogta Bulshada, sida uu sheegayo Joshipura.
Liisanka wuxuu ku shaqeeyaa iyadoo loola dhaqmayo xogta sidii lambar loona adeegsanayo hababka shati bixinta ugu fiican oo raacaya moodooyinka Apache ka dibna lagu daro xogta moodooyinka barashada qoto dheer ee qaab la mid ah sida Amazon ay si toos ah isugu dhexjirto adeeggeeda barashada mashiinka SageMaker.
Labadii mashruuc ee hore waxaa weheliya shabakada waxaana ku jirnaa sanadkii labaad ee Linux Foundation Networking aad ayaana ugu faraxsanahay horumarka dhacay, ”ayuu yiri Joshipura.
Waxaa jira tamar badan oo ka mid ah nidaamka deegaanka, iyada oo 10ka sare ee bixiyeyaasha shabakadaha firfircoon ay xubno ka yihiin Linux Foundation iyo 70% macaamiisha macaamiisha adduunka ee ay matalaan xubnaha wadayaasha.
Wadashaqeyntu waxay ka baxsan tahay xuduudaha mashruuc kasta oo aasaasi ah Linux, iyadoo kooxaha ka shaqeynaya inay wada shaqeeyaan.
“Waxaan haynaa waqtiyada Hyperledger ee ka shaqeeya isgaarsiinta. Waxaan leenahay Linux darajada gawaarida oo ku xiran gawaarida ku xiran geeska. "Mashruuc waliba waa mid iskiis u madax banaan oo madax banaan, laakiin waa mid la xiriira," ayuu Joshipura ku soo gabagabeeyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Linux Foundation waxay ujeedadeedu tahay midaynta adduunka iyada oo loo marayo ilo furan
ROSA Enterprise Desktop X4 wuxuu la yimid Kernel 4.15, KDE4 iyo inbadan
Termius macmiil SSH ah oo leh iskudhaf sir ah dhamaadka-ilaa-dhamaadka